Maxaad ka taaqaan doqonkaan ilaah haka abaalmariyo waxa uu muteestay | shumis.net
Home » galmada » Maxaad ka taaqaan doqonkaan ilaah haka abaalmariyo waxa uu muteestay
Maxaad ka taaqaan doqonkaan ilaah haka abaalmariyo waxa uu muteestay
Waxa weeye dulmi badanihii waqtigiisa, imaamka calmaaniyiinta iyo cida ay hiigsadaan basaasiinta ku dhex jirta umada muslimiinta ahi.
Waxa uu tusaale u noqday cid kaste oo neceb diinta, ku dayasho u noqday cid kaste oo munaafaq ah oo rabta kala fogaynta muslimiinta iyo isku dirkooda, waa khalqiga Allah SWT noocii ugu sharka badnaa waqtigiisii, lamana oga cid uga dhibaato badan muslimka xilligiisii.
Inkasta oo jawiga ku hareeraysnaa islaamka xilligaasi uu caawiyay in doofaarkani gacan wayn ka gaysto burbirintii khilaafada muslimiinta, noqdona sanam ay ku dawaafaan cid kaste oo muslimka iyo ehelkiisaba necebi.
Shaydaankan magiciisa waxa la yidhaahdaa Mustafa Kamal Ataturk, waxa uu ku dhashay magaalada Slanik ee ku taalla wadanka Greece imaka sannadku markuu ahaa 1298 hijriga – 1881 Miilaadiga, hooyadii waxa la odhan jiray Subayda waxaana loogu magac daray mid kamid ahaa shaqaalihii giriiga waqtigaasi.
Ninkan ayaa waxa uu kasoo jeedaa asal ahaan wadanka Serbiya, halka awowyaashiina ahaayeen yahuud qoloda loo yaqaan donma, waana qolo muujisan jirtay islaam nimo, hadana qarsan jirtay yahuud nimo si ay u ridaan dawladii cusmaaniyiinta, una fasahaadiyaan caqiidada muslimiinta.
Ataturk waxa uu ahaa sida ay qireen dadkii ka ag dhawaa nin fisqi badan oo waliba xumaanta lasoo ban baxa, waxa uu ahaa khamriyo cab zino badan, ilaa 30 dumar ah ayaa markaste la joogi jiray, waxa kale oo lagu sheegaa intuu heerkaasi sii dhaafay inuu aakhirkii noqday nooca raga wax ka daya ee qawmu luud.
Waxyaabaha ninkan lagu xasuusto waxa kamid ah:
Waxa uu xarrimay in masaajiddada laga eedaamo.
Waxa uu xijaabka ka xarrimay Turkey.
Waxa uu magaciisa ka dhex saaray Mustafa.
Waxa uu xarrimay dabaal dagga labada ciidood ee Islamka.
Maalinta axada ayuu u badalay fasaxa todobaadlaha ah ee Turkiya.
Waxa uu joojiyay barashada luqada carabiga iyo diinta.
Ugu dambayntii… waxa uu ku dardaarmay in aan lagu tukan markuu dhinto!
Hadii aynu sii wadno ka gayoon mayno dhibka uu doofaarkani Muslimka soo gaadhsiiyay, balse qadarkaas ayaynu kaga kaaftoomaynaa Ilaahay ha nacdalee.
Ninka noocan ah hadda waxa booskiisa fadhiya hogaamiye muslim ah, cadaalada ku haga wadankiisa, muslimiintana u naxariis badan, waa RAJAB DAYIB ARDOGAN Ilaahay ha garab galee.
Fadlan u faaidee walaalahaaga muslimiinta ah, hawl badan adoon galin like iyo share saar, hadaad doontana Comment raaci.
Shumis.net U Adeegaha Bulshada
Title: Maxaad ka taaqaan doqonkaan ilaah haka abaalmariyo waxa uu muteestay